Hayad cusub oo loo xilsaaray isdhexgalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Inger Ashing ayaa noqon doonta gudoomiyaha haayadda sucub. sawir: MIKAEL ANDERSSON / TT
Hayad cusub oo loo xilsaaray isdhexgalka
La daabacay fredag 29 december 2017 kl 10.29
Haayad cusub ayaa loo xilsaaray hagaajinta isdhexgalka bulshada kala duwan ee Sweden. Haayaddan oo lagu magacaabo Delegationen mot segregation ayaa shaqadeeda bilaabaysa kowda jeenaweri 2018.
Haayaddan oo ay ka howgeli doonaan 50 shaqaale ah ayay shaqadeedu noqon doontaa in ay taageerto degmooyinka iyo ururada ku howlan isdhexgalka.
-Wax badan ayaa laga qabtaa degmooyinka, balse maxaa la kala baran karaa? Halkan ayay haayaddu ka soo gelaysaa howlahan iyada oo abuuraysa isweeydaarsiga waayo aragnimadda iyo aqoonta. Sidan waxa sheegtay gudoomiyaha haayaddan Inger Ashing.
Dhaqaalaha haayaddan loo qorsheeyey ayaa lagu sheegay 75 milyan oo kron sanadka sucub, halka sanadka soo socdana la siin doono 100 milyan sanadkasta ilaa 2025. Lacagtan ayaa haayadu u isticmaali doontaa in ay ku taageerto degmooyinka u baahan si ay u kordhiyaan isdhexgalka. Ashing ayaa sheegtay in shaqada haayaddan tahay mid midho dhaleysa mustaqbalka muda dheer oo an laga filan karin in qofka iminka degen xaafadaha danyarta ah uu markiiba arko isbedelka.
Benjamin Dousa oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee Moderaterna, ahna xildhibaan laga soo doorto xaafadaha Rinkeby iyo Kista ayaa sheegay in lacagtan ay ahayd in meel kale lagu isticmaalo.
-Waxay ilatahay in aan xaafadaha danyarta ah u baahanayn meel ay ku shaahaan siyaasiyiinta iyo shaqaaluhu oo ay kaga doodaan dhibaatooyinka. Waxa loo baahayn yahay waa isbedel dhab ah, waa aan isku raacsan nahay in najiitada iskuuladu hooseeyaan iyo in fal denbiyeedyada faraha ka bexeen. Kuwan waa in aan ka wada hadalno, ayuu yidhi Dousa.
Hayadda is-dhexgalka ma loo baahnaa?